Lahateny nataon'i Aimé Césaire - Afrikhepri Fondation
La Négritude, fikomiana ilaina hanoherana ny fahatsapana ny fahefana ambony eoropeana
Ny vokatry ny tsy fitovian-kevitra dia vokatry ny toe-tsaina mafana sy misimisy ao an-tsaina.
Faly izy ary mitsambikina ny fahamendrehany.
Ny fandavana izany, midika izany fa ny fandavana ny famoretana.
Ady izany, izany hoe ady amin'ny tsy fitoviana.
Fikomiana koa io. Fa avy eo, hiteny amiko ianao hoe: manohitra inona? Tsy adinoko fa eto amin'ny fivoriambe ara-kolontsaina aho, eto, any Miami, no safidiko holazaina. Mino aho fa afaka miteny amin'ny ankapobeny ny olona iray fa ny Negritude dia endrika fikomiana voalohany tamin'ny rafitra kolontsaina manerantany satria niforona nandritra ny taonjato farany izay dia miavaka amin'ny fitsarana an-tendrony maromaro, fiheverana mialoha izay miteraka ambaratongam-pahefana tena henjana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny Negritude dia fikomiana tamin'ny antsoiko hoe fihenan-tena eropeana.
Ny tiako holazaina dia ity rafitry ny eritreritra ity na ny fironana voajanaharin'ny sivilizasiona malaza sy manankarena hanararaotra ny lazany na dia hamorona banga manodidna aza amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiheveran'ny rehetra, malala an'i Léopold Sédar Senghor , amin'ny refy misy azy, amin'ny teny hafa mba hieritreretana ny fanombohana an'izao rehetra izao manomboka amin'ny postulatany ihany ary amin'ny alàlan'ny sokajy misy azy. Hitantsika ary hitantsika tsara loatra ny vokatr'izany: ny fanapahana ny olona tsy ho eo aminy, ny fanapahana ny olona amin'ny fakany, ny fanapahana ny olona avy amin'izao rehetra izao, ny fanapahana ny olombelona amin'ny olombelona. , ary atokàny, amin'ny farany, amin'ny avonavona hamono tena, raha tsy amin'ny endrika barbarisme mirindra sy ara-tsiantifika.
Saingy, holazainao amiko, ny fikomiana izay tsy inona fa ny fikomiana dia tsy inona fa ny tsy fahombiazan'ny tantara. Raha tsy faran'ny maty ny Negritude dia satria nitondra tany amin'ny toeran-kafa izany. Taiza no nitondrany antsika? Nentiny tany aminay izahay. Ary, raha ny marina, izy io, taorian'ny fahasosorana lava, io no takatry ny tenantsika tamin'ny lasa ary, tamin'ny alàlan'ny tononkalo, tamin'ny alàlan'ny sary an-tsaina, tamin'ny alàlan'ny tantara, tamin'ny alàlan'ny sangan'asa. , ny tara-pahazavana miverimberina momba ny hoavintsika.
Ny fanakorontanana ny hevitra, ny horohorontany ara-kolotsaina, ny metaphoran'ny fisoratana dia azo atao eto. Fa ny fanalahidy dia izany efa nanomboka ny fanarenana ny soatoavina raharaham-barotra amin'ny alalan'ny tenantsika, ka vao mainka ny lasa amin'ny alalan'ny tenantsika, ny indray tsy maintsy hongotantsika ny tenantsika ao amin'ny tantara, tao amin'ny jeografia Ao amin'ny kolontsaina, ny iray manontolo dia tsy nadikan'ny pastisma efa ela, fa tamin'ny alàlan'ny famerenana ny lasa tamin'ny fahitana azy.
Haisoratra, hiteny ve isika?
Tsy misy fisalasalana. Saingy na literatiora na tsikombakomba ara-tsaina dia tsy manan-tsiny na tsy mampidi-doza. Ary raha ny marina, rehefa mieritreritra ny Afrikana fahaleovantenan'i 1960 taona, rehefa mieritreritra momba izany firongatry ny finoana sy ny fanantenana izay nitsangana tamin'izany fotoana izany, kaontinanta iray manontolo, marina izany, mihevitra aho fa ny Negritude satria mieritreritra aho fa ny Négritude dia nandray anjara, ary andraikitra iray angamba kapitalista, satria izy no anjara asam-piravahana na fanodinana.
Fa io mihitsy reconquest Afrika Tsy mora, fa ny fampiasana ny fahaleovan-tena vaovao io dia anisan'ny maro avatars, fahadisoam-panantenana ary indraindray dia mila ny Meloka tsy fahalalana ny amin'ny tantaran'ny olombelona , tantaran'ny ny firongatry ny firenena any Eoropa ihany, tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo any Eoropa sy any an-kafa, fa tsy mba hahatakatra fa Afrika, koa, dia maintsy handoa hetra tamin'ny fotoana fiovana lehibe.
Saingy tsy izany no izy. Ny teboka farany dia ny hoe namadika an'i Afrika ny kolonialisma ary namadika azy io dia nanampy tamin'ny fotoana iray vaovao hoan'ny olombelona rehetra.
Ny lahateny nataon'i Aimé Césaire dia nanambara ny 26 Febroary 1987 (USA)
Aimé Césaire: "tsia ho fanalam-baraka" _1ere_ed - manidy sy mifindra amin'ny 9782330039288
10 vaovao avy amin'ny € 9,00
4 ampiasaina amin'ny € 12,32
Vidio € 9,00
Nohavaozina farany tamin'ny 14 aprily 2021 11:36 maraina
Appendicitis: aretina sivilizasiona
Olombelona aho - Rakitra fanadihadiana (2019)
Ma Ananda Mayi dia nekena ho ilay olo-masina lehibe indrindra any Inde tamin'ny taonjato faha 20
Ny mainty no niavian'ny sivilizasiona